DISTRIKAN’ANTSOHIHY : Herinandro tsy nisy solika, miverina tsikelikely ny famatsiana ireo mpanjifa
Mbola olana goavana ao anatin’ny Distrikan’Antsohihy ny famatsiana solika ao an-toerana noho ny tsy fahampian’ny tahiry matetika. 21 août 2019
Raha tsiahivina dia efa ho herinandro tsy nisy solika nampiasaina intsony ny mponina. Nanomboka omaly raha ny loharanom-baovao voaray any an-toerana no niantomboka nitsitapitapy kely ny famatsiana teo an-tampon-tanànan’ny renivohitrin’ i Sofia ity. Voalaza fa ny solika fandrehitra (Pétrole lampant) koa no tena manahirana. Araka ny fanazavana voaray dia isany antony mahatonga ny olan’ny tsy fahampian’ny tahiry ao an-toerana ireo fiara mandeha any amin’ny Faritra Sava sy Diana iny satria saika manjifa solika eo Antsohihy avokoa.
Eo anatrehan’izay indrindra dia nisy ny fifampiresahana tamin’ny tompon’andraikitry ny mpaninjara solika ao amin’ny Galana ary nanazava izy ireo fa olana avy amin’ny fitaomana ataon’ny mpitatitra solika avy any amin’ny foibe no nahatonga ny tsy fahampian’ny solika fa tsy sanatria lany tanteraka tahiry. Mbola betsaka ny tahiry any amin’ny foibe. Nohamafisin’ ireto farany ihany koa ny namatsiana ny orinasa Jirama noho ny delestazy tamin’ny herinandro lasa iny no antony nahatonga ny solika nalaky lany. Ho fitsinjovana ireo mpanjifa hatrany dia natao ny ezaka rehetra, ka ny ny alatsinainy lasa teo no tonga ireo fiarabe mpitatitra solika miisa telo izay mahazaka hatrany amin’ny 14.000 litatra avy.
Ezahina hotohizana hatrany moa ny famatsiana amin’ity herinandro ity hialana ny amin’ny mety ho tsy fisiana ao anatin’ny fotoana maromaro indray. Voamarika tamin’izany moa fa mbola ny gazoala sy lasantsy no tonga ny alatsinainy lasa teo raha toa ka efa nanafatra solika fandrehitra ihany koa ry zareo ao amin’ny tobin-tsolika “Galana”. Raha ny vidiny indray, hoy ny tompon’andraikitra dia tsy misy fiovany no sady nanafatrafatra an’ireo mpamongady solika any ambanivohitra ry zareo mba tsy hanararaotra ny fahasahiranan’ny vahoaka, indrindra ny amin’ny vidin’ny solika fandrehitra.